Ciidamada Ammaanka oo soo afjarey weerarkii Hote SYL – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa xalay saqdii dhexe waxaa la sheegay inay soo afjaray, hawlgalkii hoteelka SYL ee Muqdisho oo fiidnimadi weerareen Xubno ka tirsan Al Shabab.
Af-hayeenka dawladda Soomaaliya, Ismaaciil Mukhtaar Oronje oo la hadlay Voa ayaa sheegay in la dilay dhammaan shan nin oo weerarka ka dambaysay.
Afhayeenku waxa uu sheegay inay sidoo kale ay dhinteen 5 qof oo ay ku jiraan laba ruux oo shacab ah iyo saddex ka mid ah askarti howlgalka badbaadada fulisay.
Weerarka ayaa bilwoday daqiiqado ka hor 7-dii fiidnimo ee xilliga Muqdidhsu. Waxaana la sheegay in Ragga weerarka fuliyey ay qaar rasaas ku fureen ciidamada ilaalada madaxtooyada halka kuwo kalena ay galeen hoteelka SYL.
Ugu yaraan laba ka tirsan xildhibaannada baarlamaanka Soomaaliya ayaa la sheegay in la dhaawacay lagana soo badbaadiyey Gudaha Hotelka SYL.
Mid ka mid ah saraakiisha ciidanka Soomaaliya Gaashaanle Dhexe Cabdiraxmana Cumar Jeeniqaar oo taliye u ahaan jiray ciidanka Danab ayaa ku sugnaa hoteelka marka weerku dhacay. Waxa uu u sheegay in ciidankiisa ay difaaceen isaga iyo dad kale oo badbaaday.
Waxa uu sheegay taliyuhu, in raga weerarka soo qaaday ay ku hubaysnaayeen qoryaha fudud iyo barmbaanooyinka gacanta laga rido.
Hoteelka ayaa ku yaalla meel u dhow madaxtooyada Soomaaliya,waxaana Ururka Al Shabab ay isla hoteelkaas weeraray laba jeer hore.
Masuuliyadda weerarkaan ayaa waxaa sheegtay ururka Al Shabab.